Iisirinji zesitofu sokugonya se-COVID ngoku ZiseMphantsi: Zingalubeka esichengeni uGonyo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Iisirinji zesitofu sokugonya se-COVID ngoku ZiseMphantsi: Zingalubeka esichengeni uGonyo
Kuqikelelwa ukuba kukho umsantsa wobonelelo lwemalike yehlabathi ye-1.2 yebhiliyoni ye-autodisable (AD) yezixhobo zesitofu esikhuselekileyo sokuhanjiswa kogonyo lwe-COVID-19. Esi sikhewu sobonelelo sisemngciphekweni wokuba sisithintelo esinokuthi soyikise ukuziswa kwamayeza okugonya ngexesha kwisiqingatha samazwe aseMhlabeni.
Ngomhla we-11 kaNovemba, i-PATH kunye neNgxowa-mali yaBantwana yeZizwe eziManyeneyo (UNICEF) ibambe iGlobal COVID-19 Isitofu soShishino lokuDibanisa iSiringe yoShishino oludibanisa ngaphezulu kweshumi elinesibini labavelisi besirinji abaphambili kwihlabathi kunye nemibutho yamazwe ngamazwe ukuququzelela ukwanda kokungafihlisi malunga nemarike yesirinji ye-AD ukunceda. Ukubonelela ngenkxaso kwizitofu zokugonya i-COVID-19 kunye nogonyo lwesiqhelo. Abavelisi baqinisekise imiceli mngeni yokubonelela nge-AD yesirinji yehlabathi ukusuka ekupheleni kuka-2021 ukuya phakathi ku-2022, ngaphandle kokuphindaphinda kathathu imveliso yabo kunye neenzame zemibutho yamazwe ngamazwe ukukhusela iisirinji ezongezelelweyo ze-AD kumazwe anengeniso ephantsi kunye nephakathi azidingayo.
I-spike eqikelelwayo kwimfuno yeesirinji zogonyo lwe-COVID-19, kuqikelelwa ukuba iyonke ngaphezulu kwe-4 yeebhiliyoni ukusuka ekupheleni kuka-2021 ukuya phakathi ku-2022, kungenxa yotyando oluqikelelweyo lokuhanjiswa kwethamo lokugonya le-COVID-19 kumazwe ezayo ngeCOVAX, enkulu. iminikelo evela koorhulumente, kunye nezivumelwano zamazwe amabini. Ngokusekwe kunikezelo lwehlabathi kunye nedatha yemfuno, i-PATH modeling iqikelela i-gap yehlabathi ye-1.2 yeebhiliyoni zeesirinji ze-AD.
Imingcipheko yobonelelo lwesirinji olunje ngezithintelo zokuthumela ngaphandle elizweni, ukulibaziseka kokuthunyelwa kwenqanawa, imigca emitsha yokuvelisa isilela ukufumana isiqinisekiso sangaphambili soMbutho wezeMpilo weHlabathi (i-WHO), okanye ukulibaziseka ekugqityweni kolwandiso lwemveliso olucwangcisiweyo kunokwandisa isithuba esongezelekayo siye ngaphezulu kwe-2 yeebhiliyoni ngeli xesha. Iidosi ze-Booster zinokudala uxinzelelo olongezelelweyo kwintengiso.
Ugonyo lwenziwa kuphela ngeesirinji ze-AD kumazwe aphantse abe ngama-70, kwaye amazwe angama-30 azisebenzisela ugonyo oluthile. Ukususela ngowe-1999, iWHO, iUNICEF neUnited Nations Population Fund ziye zancomela ukuba kusetyenziswe iisirinji zeAD kuphela ehlabathini lonke ukuze kugonywe njengoko “zibonisa eyona ngozi yosulelo lwezifo ezisasazwa egazini ezifana nehepatitis B okanye iHIV” ngenxa yokuba iinaliti ze-AD azinakususwa okanye zisetyenziswe kwakhona.
Okubalulekileyo, zonke iisirinji ze-AD zibonelela ngeedosi ezimiselweyo, okuthetha ukuba zinokuzaliswa kuphela ngesixa esichanekileyo sedosi yesitofu sokugonya esinye. Uninzi lwezitofu zokugonya, kuquka nezo zogonyo oluyimfuneko lwabantwana, zisetyenziswa kusetyenziswa umthamo wedosi eyi-0.5-mL kunye nesirinji ehambelana ne-AD. Imiqobo yokwenziwa komsebenzi eyayanyaniswa nokuhanjiswa kweesirinji ze-AD iye yanda ngophuhliso lwesitofu sokugonya, njengokufumaneka komlinganiselo omkhulu wakutsha nje wesitofu sokugonya se-Pfizer esifuna indawo ekhethekileyo ephantsi-efileyo eyi-0.3-mL AD yesirinji, engazange iveliswe ngaphambili. Iisayizi ezintsha zeesirinji ziphambukisa imigca yokuvelisa ekuveliseni iisirinji ezisemgangathweni ze-AD kwaye zongeze kwimingeni yokuthelekisa iidosi zesitofu sokugonya kunye nobungakanani obuchanekileyo besirinji kwindawo yokugonya.
Iindlela ezinokubakho zokuvala umsantsa ukukhawulezisa ufikelelo, ukunciphisa ulibaziseko, ukuphucula ukhuseleko, nokwakha ubonelelo oluzinzileyo lubandakanya:
• Ukwandisa umthamo wokwenziwa kwemveliso ngotyalo-mali olucwangcisiweyo kunye nenkuthazo ukwakha ubonelelo oluzinzileyo kunye nokunciphisa ulibaziseko lokuthumela ngenqanawa: Abaxhasi, abatyali-mali, kunye noorhulumente banokusebenzisa izixhobo ezisetyenziselwa ukukhuthaza ababoneleli ngogonyo, kubandakanywa izibonelelo, akukho- okanye imali-mboleko enenzala ephantsi, kunye neziqinisekiso zomthamo ukulungisa umngcipheko othile kubaboneleli. Kubaluleke ngakumbi ukwandisa ukwenziwa kwesirinji yasekhaya e-Afrika naseLatin America, apho kukho isiseko sobonelelo esinyiniweyo kunye namaxesha amade okuthumela ngenqanawa kubonelelo lwaphesheya kolwandle.
• Phinda uvavanye iimeko zokusetyenziswa: De kube kusonjululwe ukunqongophala kwesirinji ye-AD, amazwe akwaziyo ukusebenzisa ezinye iintlobo zeesirinji zokhuseleko anokunceda ekugcineni ubonelelo lwesirinji ye-AD kumazwe aneenkqubo zempilo ezithintelweyo.
• Ukulungelelanisa umthamo wethamo lesitofu sokugonya: Ukuba abavelisi besitofu sokugonya banokuqulunqa amayeza okugonya amatsha e-COVID-19, izixhobo ezomelezayo, kunye needosi zabantwana ukuze zingqinelane nedosi emiselweyo yedosi emiselweyo ye-AD, oko kuya kulungelelanisa izinto, ukwenziwa, kunye namaphulo ogonyo.
• Ukunqanda izithintelo zelizwe zokuthumela izinto kumazwe angaphandle ezikhawulela ngakumbi ubonelelo: Amazwe anesakhono sokwenza isirinji anokunceda ukulungisa izikhewu zokubonelelwa kwelizwe jikelele ukuhlangabezana nethagethi yogonyo lwama-70 eepesenti.
I-PATH iya kuqhubeka nokubeka iliso kwimarike, kunye nokuhlaziywa okulindelweyo kwidatha ngo-2022 ukuba kukho utshintsho olubalulekileyo. Imodeli yangaphambili ye-PATH ekhutshwe ngoDisemba ka-2020 ichonge imingcipheko ephambili, kubandakanya ukungaqiniseki kwemfuno kunye nexesha, ukuhanjiswa kwempahla, kunye nemiqobo yokugcina impahla.